Bitcoin စျေး - အွန်လိုင်း BTC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Bitcoin (BTC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Bitcoin (BTC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Bitcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $166 478 763 421.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Bitcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Bitcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitcoinBTC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$56465.27BitcoinBTC သို့ ယူရိုEUR€46890.4BitcoinBTC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£40610.5BitcoinBTC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.51723.6BitcoinBTC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr469755.56BitcoinBTC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.348705.93BitcoinBTC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1212557.88BitcoinBTC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł213715.36BitcoinBTC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$70543.59BitcoinBTC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$72877.7BitcoinBTC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1126402.54BitcoinBTC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$438175.32BitcoinBTC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$314483.34BitcoinBTC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4232660.02BitcoinBTC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.8653520.1BitcoinBTC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$74993.22BitcoinBTC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$78612.31BitcoinBTC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1769621.68BitcoinBTC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥366527.39BitcoinBTC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6102093.56BitcoinBTC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩63122504.86BitcoinBTC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦21527385.66BitcoinBTC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4303466.97BitcoinBTC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1581535.57
BitcoinBTC သို့ EthereumETH28.1 BitcoinBTC သို့ LitecoinLTC253.25 BitcoinBTC သို့ DigitalCashDASH217.84 BitcoinBTC သို့ MoneroXMR214 BitcoinBTC သို့ NxtNXT927159.8 BitcoinBTC သို့ Ethereum ClassicETC2929.98 BitcoinBTC သို့ DogecoinDOGE939017.5 BitcoinBTC သို့ ZCashZEC326.03 BitcoinBTC သို့ BitsharesBTS491134.95 BitcoinBTC သို့ DigiByteDGB705815.92 BitcoinBTC သို့ RippleXRP60304.91 BitcoinBTC သို့ BitcoinDarkBTCD186746772444.95 BitcoinBTC သို့ PeerCoinPPC57820.44 BitcoinBTC သို့ CraigsCoinCRAIG2469018395791643 BitcoinBTC သို့ BitstakeXBS22749.86 BitcoinBTC သို့ PayCoinXPY22586109.54 BitcoinBTC သို့ ProsperCoinPRC5646527385657.82 BitcoinBTC သို့ YbCoinYBC31.37 BitcoinBTC သို့ DarkKushDANK1737457389631281.25 BitcoinBTC သို့ GiveCoinGIVE11727837380011292 BitcoinBTC သို့ KoboCoinKOBO4348955.39 BitcoinBTC သို့ DarkTokenDT52010.16 BitcoinBTC သို့ CETUS CoinCETI781855825334274.38
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 22 Apr 2021 10:55:01 +0000.